China ZBW (XWB) Series AC Box-Type Substation mpanamboatra sy mpamatsy | Xinneng
Ny andian-tsarimihetsika ZBW (XWB) misy karazana box box AC dia manambatra fitaovana elektrika avo lenta, mpanova ary fitaovana elektrika ambany herinaratra ho lasa fitaovana fanaparitahana herinaratra feno, izay ampiasaina amin'ny tranobe avo be an-tanàn-dehibe, an-tanàn-dehibe sy ambanivohitra. trano, trano fonenana, faritra fampandrosoana teknolojia avo lenta, Zavamaniry kely sy salantsalany, toeram-pitrandrahana, tanimbary ary toerana fananganana vonjimaika no ampiasaina handraisana sy hizarana angovo herinaratra ao amin'ny rafitry ny fanaparitahana herinaratra.
ZBW (XWB) AC box-type substation dia manana ny mampiavaka azy feno setroka matanjaka, habe kely, rafitra matevina, fandidiana azo antoka sy azo antoka, fikojakojana mety ary fivezivezena. Raha ampitahaina amin'ny fiovan'ny sivily mahazatra, ny karazana boaty manana fahaiza-manao mitovy ihany no mitazona faritra iray, mazàna 1 / 10-1 / 5 amin'ny tsangambato mahazatra, izay mampihena be ny habetsaky ny endrika famoronana sy ny volan'ny fananganana ary mampihena ny vidin'ny fananganana. rafitra fizarana, azo ampiasaina amin'ny rafitra fizarana angovo tambajotra peratra, ary azo ampiasaina amin'ny rafitra fitsinjaram-pahefana roa na ny rafitra fizarana hery amin'ny taratra taratra. Izy io dia karazana fitaovana vaovao amin'ny fananganana sy fanovana ny toeran'ny tanàna sy ambanivohitra.
ZBW (XWB) andian-tsarimihetsika karazana andian-tsarimihetsika dia mahafeno ny fenitry ny SD320-1992 "Fomba ara-teknika fanoratana karazana boaty" ary GB / T17467-1997 "Fanamafisam-peo prefabrika avo-voltage / low voltage".
Modely sy ny dikany
Fepetran'ny tontolo iainana miasa
1. Ny haavony dia tsy mihoatra ny 1000m.
2. Ny mari-pana ambony indrindra dia tsy mihoatra ny +40℃, ny ambany indrindra dia tsy ambany noho -25℃, ary ny maripana antonony ao anatin'ny vanim-potoana 24 ora dia tsy mihoatra ny +35℃.
3. Ny hafainganam-pandehan'ny rivotra any ivelany dia tsy mihoatra ny 35m / s.
4. Ny mari-pana ampitan'ny rivotra dia tsy mihoatra ny 90% (+25℃).
5. Ny fihomboan'ny horohorontany dia tsy mihoatra ny 0.4m / s2, ary ny hafainganam-pandeha dia tsy mihoatra ny 0.2m / s2.
6. Tsy misy toerana misy afo, loza ateraky ny fipoahana, fandotoana lehibe, fahasimbana simika ary hovitrovitra mafy.
Fanamarihana: Fepetra manokana amin'ny fampiasana, mifampiraharaha amin'ny orinasanay rehefa manafatra.
Fitaovana elektrika misy herinaratra avo lenta
Naoty Capacity Se
Karazana Mu: 200-1250
Karazana pin: 50-400
Misy laharana ankehitriny Ie
Misy mari-pototra ankehitriny
Load switch 400-630A
Ny fitaovana fampifangaroana dia miankina amin'ny sekta
Misy laharana fohy hanefana ny ony ankehitriny
Laharana avo indrindra mahatanty ny onja ankehitriny
Misy laharana manao ankehitriny
Faharetan'ny herinaratra mahazaka herinaratra （Imin）
Mifandraika amin'ny tany sy ny dingana 42 30
loko: 35 / 5min
Faharahana mitoka-monina 48、34
Maina: 28 / 5min
Mifandraika amin'ny tany sy ny dingana 75 60
Faharahana mitoka-monina 85、75
loko: ＜ 55
Maina ： ＜ 65
Torolàlana momba ny famandrihana
Azafady mba omeo ity fampahalalana manaraka ity rehefa manafatra:
1. Fomba fisoloana karazana boaty;
2. Modely sy fahaiza-manao Transformer;
3. Sarin-drafitry ny tariby tariby avo sy ambany
4. Modely sy masontsivana amin'ireo singa elektrika misy fepetra takiana manokana;
5. Loko akorany;
6Mba omeo izao fampahalalana manaraka izao rehefa manafatra：
6. Ny anarana, ny habetsahana ary ny fepetra takiana amin'ny kojakoja fanampiny.
Teo aloha: Cummins Generator Series
Manaraka: GGD AC Kabinetra fanaparitahana herinaratra ambany
Kabinetra fizarana Oem